တပ်မတော် ဆိုင်ရာ အကြံပြု၊ဆွေးနွေးခန်း: June 2011
အဲဒီ့ အချိန်မှာ တိုက်ပွဲ နယ်မြေတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်ခရိုင်၊ ချင်းရိုင်ခရိုင်တွေမှာ ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ တွေက မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပက်သက်ပြီး စစ်ဆင်ရေး လုပ်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်တယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကပြောဆို လာတာက UWSA ဝ တပ်ဖွဲ့တွေဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ထုတ်လုပ်နေတယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ဖြန်းဖြူးနေတယ်လို့ စွပ်စွဲလာတယ်။ အဲဒိ့ အပြင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် သက်ဆင် ကိုယ်တိုင်က မြန်မာအနေနဲ့ UWSA ကို အရေးမယူရင် ထိုင်းတပ်က မြန်မာပြည်ထဲထိဝင်ပြီး UWSAရဲ့ ဘိန်းချက်စခန်းတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ ပြောဆိုကြောင်း ထိုင်းမီဒီယာတွေကနေ ဖေါ်ပြခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း မြန်မာ့မြေပေါ်ကို ဘယ်နိုင်ငံခြားတပ်ဖွဲ့မှာ အဝင်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ SSA တပ်ဖွဲ့တွေကို နောက်ကွယ်ကနေ ထောက်ပံ့နေပြီး ဒီအဖွဲ့တွေဟာ ဘိန်းမှောင်ခို လက်နက်ကိုင်တွေ၊ ဘိန်းဓါးပြ တွေသာဖြစ်တယ်လို့ တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်။ သံအမတ်ကြီးတွေကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနကို ခေါ်ယူပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးတာတွေ နှစ်နိုင်ငံလုံး အပြန်အလှန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ထိုင်းတပ်တွေဟာ နယ်စပ်မြို့တွေ၊ နယ်စပ်မျဉ်းအနီးက လမ်းတွေ၊ ရှေ့တန်းစခန်းတွေမှာ သံချပ်ကာ ကားတွေနဲ့ ကင်းလှည့်တာတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ၂၀၀၁ တုန်းကလို တာချီလိတ်မြို့ထဲနဲ့ မယ်ဆိုင်မြို့ထဲကို လက်နက်ကြီးတွေအပြန်အလှန် ပစ်ခတ်တာမျိုး မရှိခဲ့ပေမယ့် တာချီလိတ်မြို့ထဲမှာ ဗုံးတွေ ကွဲခဲ့တယ်။
မြန်မာ့ တပ်မတော်က မုံးထော်-မုံးထ ဒေသတစ်ခုလုံးနဲ့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ စစ်စခန်းတွေ အားလုံး ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ SSA တပ်တွေ ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ လွယ်တိုင်းလျှံဘက်ကို ဆက်လက် ထိုးစစ်ဆင်ကြတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ထိုင်းစစ်သေနာပတိချုပ်ရာထူးကို အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်ကို လိုအပ်ရင် အင်အားသုံးမယ်လို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆူရာယုဒ် ချူလာနော့ ရာထူးက အနားယူရပြီး စစ်သေနာပတိချုပ် အသစ်က SSA ကို ထောက်ပံ့ကူညီနေတာတွေ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်။ SSA လည်းလွယ်တိုင်းလျှံဘက်ကို အားလုံး ဆုတ်ခွာသွားရတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ UWSA တပ်ဖွဲ့တွေလည်း လွယ်တိုင်းလျှံ ဒေသနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တောင်ကြောတွေပေါ်မှာ ကာကင်းစခန်းတွေ တည်ဆောက်ပြီး ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့ကြပြီး တိုက်ပွဲတွေ အခိုက်အတန့် ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွင်းမှာ တပ်မတော်ဟာ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ နယ်မြေတွေ အားလုံး ပြန်ရအောင် တိုက်ယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အကျအဆုံးများခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေ အတွင်း ကျဆုံးခဲ့သူတွေ ရှိသလို တာချီလိတ်၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းတုံ မြို့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ထောက်ပံ့ရေး လမ်းကြောင်းတွေမှာ မကြာခဏ ခြုံခို တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ အတွက် ကျဆုံးရတာတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ UWSA တပ်ဖွဲ့ကလည်း ကျဆုံးမှုများခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူနဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ဆုံးရှုံးသူတွေလည်း အတော်များများ ရှိခဲ့တယ်။ ၁၂၀ မမ စိန်ပြောင်းကြီးတွေဟာ တိုက်ပွဲကို အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်တဲ့ နည်းဗျူဟာ လက်နက်ကြီးတွေ အဖြစ်မြင်တွေ့ခဲ့ရ ပေမယ့် တချို့တိုက်ပွဲတွေမှာ ပစ်မှတ်ကို အတော် ဝေးဝေး လွဲချော်တာတွေ အားနည်းချက်အဖြစ် တွေ့ခဲ့ရတယ်။ တိုက်ပွဲအတွင်းပျက်ဆီးသွားခဲ့တဲ
့ ရွာတွေကို ပြန်တည်ပေးခဲ့ပေမယ့် တိုက်ပွဲမတိုင်ခင် က နေထိုင်လာတဲ့ လူအားလုံး ပြန်လာမနေနိုင်ကြတော့သလို အရင်လိုလည်း စည်ကားခြင်း မရှိတော့ပါ။ တိုက်ပွဲစဉ် တစ်ခုလုံးမှာ ဝမ်းနည်းဖို့ အကောင်းဆုံးကတော့ အရပ်ဘက် ဝန်ထမ်းတွေ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။
အခုတော့ အရင်က စည်ကားတဲ့ ရွာကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ တိုက်ပွဲတွေ အတွင်းမှာ ရွာပျက်ကြီး ဖြစ်သွားတဲ့ မုံးထရွာနေရာမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းက စပြီး မုံးထမြို့ အဖြစ် မြို့အသစ် တည်ဆောက်နေပါပြီ။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လင်းခေးခရိုင် မိုင်းပန်မြို့နဲ့လည်း ကားလည်း ဖေါက်လျက်ရှိပြီး မိုင်းပန်-မုံးထ လမ်းမှာ သံလွင်မြစ်ကို ဖြတ်ပြီး သံလွင်မြစ်ကူးတံတားသစ်ကြီးလည်း တည်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်နေပါပြီ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာတာနဲ့ အမျှ ဒေသရဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေ ကောင်းမွန်လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ၂၀၀၃ တိုက်ပွဲတွေရဲ့ စစ်ဘေးဒဏ်အဖြစ် ရွာပျက်တွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အကြွင်းအကျန်တွေကို ယနေ့တိုင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ်။ အခုပြန်တည်ထားတဲ့ ရွာတွေရဲ့ မနီးမဝေးမှာ ချုံတောတွေ ဖုံးလွှမ်းနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ရွာပျက်တွေ ရှိပါတယ်။
အဲဒီ့တုန်းက ခက်ခက်ခဲခဲ ပြန်တိုက်ယူခဲ့ရတဲ့ ပန်မိုင်ဆွန်၊ ပန်ကန့်ကော်၊ ကျူဆန်ကပ်၊ မုံးထော်၊ မုံးထ၊ ညောင်ပင်ကုန်း၊ ၄၀၀၈၈၇ စတဲ့ စခန်းတွေ အားလုံးဟာ ယခုအခါ မဆုတ်တန်းခံစစ် စခန်းတွေ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မည်သည့် အခြေအနေနဲ့ ကြုံရသည်ဖြစ်စေ စခန်းကို စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒီစခန်းတွေကနေ ဆုတ်ခွာခွင့်ကို အမိန့်ပေးနိုင်သူဟာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တစ်ဦးပဲ ရှိပါတယ်။
အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့ ကျွန်တော် သိမှီသလောက် ၂၀၀၃ ခုနှစ် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် တိုက်ပွဲများ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လွဲမှားနေတာ၊ မပြည့်စုံတာတွေရှိရင် သိတဲ့သူတွေက ထောက်ပြ ပြုပြင် ပေးကြပါ။
ရေးသားသူ MM at 2:25 PM3comments:
ခေါင်းစဉ်လိုက် ယိုးဒယား, အမြောက်တပ်
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ပဋိပက္ခ (၂၀၀၃) အပိုင်း-၁
ယခုဖော်ပြသော သမိုင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါသည် ကိုcomrade ပေးပို့သော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ယခုဆောင်းပါး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်တွင်း မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နေသော ယိုးဒယားများ အကြောင် ဖော်ပြချက်သာ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင်များ အရေးနှင့် မသက်ဆိုင်ပါခင်ဗျာ..။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုcomrade ခင်ဗျာ...။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ပဋိပက္ခ (၂၀၀၃)
(ဒီအကြောင်း ရေးသားရတာက ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိလို့ မှီလို့ ရေးတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကြိုတောင်းပန်ပါရစေ။ ကျွန်တော် သိသလောက် ရေးတဲ့ထဲမှာ လွဲမှားတာတွေ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ C-box မှာ ကိုsawkofan မေးထားတာကို ပြန်ဖြေ ပေးတဲ့သူ မတွေ့သေးတဲ့ အတွက် တကယ်နားလည်တဲ့ သိတဲ့ လူတွေ မပြောခင် သိသလောက်လေး နည်းနည်း ပြောပြတာပါ။ လွဲမှားနေတာတွေ ရှိရင် သိတဲ့လူတွေက ထောက်ပြ ပြုပြင်ပေးကြပါ ခင်ဗျား။)
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ၂၀၀၁ တိုက်ပွဲစဉ်တွေနဲ့ ပက်သက်လို့တော့ ကျွန်တော် အနည်းအကျဉ်းပဲ ကြားဖူးပါတယ်။ တိုက်ပွဲမှာ ပါခဲ့ဖူးတဲ့ တပ်မတော်သားအချို့နဲ့၊ သူတို့ဆီက တဆင့်စကားကြားဖူးသူတွေ ဆီကနေ ထပ်ဆင့်ပြီး အနည်းအကျဉ်းသာ ကြားဖူးနားဝ ရှိပါတယ်၊ ထင်ရှားတဲ့ တိုက်ပွဲတွေက အို-၇ တောင်ကုန်းတိုက်ပွဲ၊ ပါချီးစခန်း တိုက်ပွဲ၊ ဘီပီ-၁ စခန်းတိုက်ပွဲ၊ လွယ်တော်ခန်းတိုက်ပွဲ၊ လွယ်ခန်းရှိုးတိုက်ပွဲ၊ စတဲ့ တိုက်ပွဲကြီး တိုက်ပွဲငယ်ပေါင်း များစွာ ပါပါတယ်။ မိုးသီးဇွန် ဘလော့မှာ ကိုsawkofan ဖတ်ဖူးတဲ့ ကျောက်ခေတ်တပ်မတော် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးက ဆောင်းပါးရှင် ဂါမဏိ ရေးတာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဖတ်ဖူးတယ်၊ သူ့ဆောင်းပါးမှာတဲ့ တချို့အချက်တွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် အရမ်းလွဲနေမှန်း သိသာပါတယ်၊ (ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ ရုပ်သံလိုင်းကလွှင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ယူပြီး ရေးခဲ့သလားတော့ မသိပါ)။ မြန်မာဘက်က တိုက်ပ်-၆၉ တင့်ကားတွေ သုံးပြီး ထိုင်းဘက်က အမ်-၆၀ တင့်ကားတွေနဲ့ ခုခံခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်၊ ရှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း တစ်ခုလုံးမှာ တိုက်ပ်-၆၉ လို ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်တွေ တစီးမှ မရှိပါ။ မြေပြင် အနေထားကလည်း တင့်တွေ ရှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်းကို သယ်ယူဖို့နဲ့ အဲဒီ့ ဒေသမှာ စစ်ဆင်ဖို့ အခြေအနေ မပေးပါ။ ထိုင်းဘက်ကလည်း တကယ်သုံးခဲ့တာက သံချပ်ကာ လူသယ်ယာဉ်တွေနဲ့ ခြေလျင် တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်တွေပါ။
ဆောင်းပါးရှင် ဂါမဏိ ရေးထားတာ သတင်း အချက်အလက် အလွဲအမှားတွေကို အခြေခံပြီး ရေးထားတယ် ဆိုတာလောက်တော့ ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်။၂၀၀၁ တိုက်ပွဲစဉ်တွေနဲ့ ပက်သက်လို့ ပိုသိတဲ့ လူတွေ ဆွေးနွေးပေးပါလိမ့်မယ်။ အခု ၂၀၀၃ တိုက်ပွဲစဉ်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်သိသလောက် နည်းနည်း ဆွေးနွေးပါ့မယ်၊ ကျွန်တော်က ဒီတိုက်ပွဲစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့လို့ မဟုတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ စစ်ဆင်ရေး နယ်မြေက အဲဒီ့ ဒေသနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အတွက် အနည်းအကျင်း သိခဲ့ရပါတယ်။
အဓိက တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေကတော့ တြိဂံဒေသ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေ မုံးထော်-မုံးထ ဒေသ ဖြစ်ပါတယ်။ မုံးထော်(ရှမ်းအခေါ် မိုင်းတော့)-မုံးထ(မိုင်းထား) ဒေသ ဟာ ကြိဂံဒေသ အနောက်တောင်ဘက်စွန်း သံလွင်မြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်းမှာ တည်ရှိပြီး အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်
နယ်မြေ ဟိုမိန်းဒေသ နဲ့ နယ်မြေချင်း ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဟိုမိန်းဒေသနဲ့ မုံးထော်-မုံးထဒေသ အစပ်မှာ SSA ဌာနချုပ် လွယ်တိုင်းလျှံစခန်း တည်ရှိပါတယ်။ လွယ်တိုင်းလျှံ စခန်းဟာ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မျဉ်းပေါ်မှာ ရှိပြီး နယ်နိမိတ် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ တောင်ကြော တလျှောက် အလျားလိုက် တည်ရှိပါတယ်။ လွယ်တိုင်းလျှံစခန်းရှေ့နဲ့ ဘယ်ညာမှာ ကာကင်း စခန်းပေါင်း များစွာရှိပြီး SSA ဟာ လွယ်တိုင်းလျှံဝန်းကျင် ဧရိယာ အတော်များများကို စိုးမိုး ထားနိုင်ပါတယ်။ လွယ်တိုင်းလျှံရဲ့ အဆောက်အဦ အတော်များများဟာ မြန်မာနယ်နိမိတ်ထဲမှာ ရှိပေမယ့် ဝင်ပေါက်တွေက ထိုင်းဘက်ကပဲ ဝင်လို့ရပါတယ်။ မြန်မာဘက်ခြမ်းကို အခိုင်အမာ ခံစစ်ပြင်ထားပြီး ရှေ့မှာ သတ်ကွင်း ဖန်တီး ထားပါတယ်။ SSA ရဲ့ လွယ်တိုင်းလျှံ ကာကင်းတွေရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတော့ မြန်မာ့ တပ်မတော် ရှေ့တန်း ကာကင်းစခန်းတွေ ရှိပါတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် တောင်ကြောတွေမှာ တဖက်နဲ့ တဖက် အသင့် ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အနေအထားပါ။
ထုံးစံ အတိုင်းပါပဲ တိုက်ပွဲတွေ စတင် ဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန်ကတော့ ထိုင်း-အမေရိကန်ပူးတွဲ Cobra Gold စစ်လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်တဲ့ အချိန်ပါ။ (ထုံးစံ အတိုင်းလို့ ဆိုရတာက နယ်စပ်က မြန်မာ့တပ်မတော် စခန်းတွေ အတိုက်ခံရတဲ့ အချိန်တိုင်း လိုလိုဟာ Cobra Gold ပြုလုပ်မယ့် အချိန်ကာလ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်)။ လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေ မြန်မာ့ တပ်မတော်စခန်းတွေ ကို ဝင်တိုက်တာတွေဟာ Cobra Gold နဲ့ အချိန်ကိုက် ဖြစ်လေ့ရှိတာ တိုက်ဆိုင်မှု သက်သက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ့ နယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ထိုင်းတပ်ဟာ ဝင်မပါပေမယ့် သူတို့ နယ်စပ်ကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ နယ်စပ်မှာ လက်နက်ကြီးတွေ အပြည့်အစုံနဲ့ တပ်လှန့်ခြင်း တပ်အသင့်နေရာယူခြင်းတွေ လုပ်ပြီး မြန်မာ့ တပ်မတော်ကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေ နောက်မှာ အသင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က Cobra Gold စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုဟာ ပုံမှန် ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရုံသက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန်က ထိုင်းကို လက်နက်ရောင်းတဲ့ပွဲလည်း ဖြစ်တယ်။ စစ်လေ့ကျင့်မှုမှာပါတဲ့ အမေရိကန်တပ်တွေဟာ လက်နက် အပြည့်အစုံနဲ့လာလေ့ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် စစ်လေ့ကျင့်မှု ပြီးတဲ့အခါ ပါလာတဲ့ လက်နက်ကြီးတွေကို ပြန်ယူမသွားဘဲ ထိုင်းကို အထူးဈေးနဲ့ ရောင်းခဲ့လေ့ရှိပါတယ်။ စစ်လေ့ကျင့်မှုကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး လက်နက်ကြီးတွေကို လျှော့ဈေးနဲ့ သက်သက်သာသာ ပေးပစ်ခဲ့တဲ့ သဘောပါ။ ဒီလို ထိုင်းမှာ လက်နက်တွေ အသင့် လေ့ကျင့်မှု အသင့် ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ နယ်စပ်က တပ်မတော်စခန်းတွေ အမြဲလိုလို တိုက်ခံရပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် Cobra Gold ကိုမြန်မာနိုင်ငံ တာချီလိတ်ဒေသ၊ လွယ်လန်းဒေသတွေနဲ့ ကပ်လျက် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရိုင်ခရိုင် နယ်စပ်မှာ ပြုလုပ်သွားပါတယ်။ ထိုင်းတပ်တွေ ချင်းရိုင်ခရိုင်ထဲမှာ အသင့်ရှိနေချိန် မေလလယ်မှာ ထိုင်းမြန်မာ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေ ၊ ရှေ့တန်းတပ်ချင်း ထိတွေ့မှုတွေ ဖြစ်လာတာပါ။
၂၀၀၃ တိုက်ပွဲစဉ်တွေဟာလည်း အလားတူပါပဲ။ Cobra Gold မတိုင်ခင်မှာ SSA တပ်တွေဟာ တပ်မတော်ရှေ့တန်း စခန်းများကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။ တပ်မတော်ရှေ့တန်း စခန်းတွေဟာ နယ်စပ်အနီးမှာရှိပြီး SSA တပ်တွေဟာ ထိုင်းဘက်ကနေ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတာပါ။ လက်နက်အင်အား လူအင်အား ကောင်းကောင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက လက်နက် အထောက်အပံ့ပြုမှာ သံသယဖြစ်စရာ မရှိပါ။ ရုတ်တရက် အလစ်အငိုက် ထိုးစစ်ဆင်ခံရပြီး တပ်မတော် စခန်း အတော်များများ ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု အနေနဲ့ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်အမှတ်(၅) ဘီပီ-၅ ဒေသကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီး SSA က ထိန်းချုပ်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီ့ ဒေသမှာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ ဆေးရုံ၊ စာသင်ကျောင်း၊ စတဲ့ အဆောက်အဦတွေ ဖျက်ဆီးခံရပြီး အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းတချို့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ စစ်ပွဲကြောင့် ဘီပီ-၅ နယ်စပ်မှာ တည်ရှိတဲ့ ပန်ကန့်ကော်ရွာနဲ့ အဲဒီ့ မရောက်ခင်က ပန်မိုင်ဆွန်၊ ကျူဆန်ကပ်၊ မုံးထော်၊ မုံးထ ရွာတွေ လုံးဝနီးပါး ပျက်ဆီးသွားခဲ့ပြီး ဒေသခံတွေလည်း အများအပြား ထိခိုက်သေဆုံးကြရကာ အဲဒီ့ ဒေသခံ လူအားလုံး နေရပ်ကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတယ်။ တပ်မတော်က အမှတ်(၃၃) ခြေမြန်တပ်မ လက်အောက်ခံတပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့များနဲ့ ဒီဒေသကို ပြန်လည် ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်။ ကြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံ တပ်အချို့လည်း စစ်ဆင်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ တပ်မတော်နဲ့ အတူ UWSA 'ဝ' တပ်ဖွဲ့ များလည်း ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။
တပ်မတော်ဘက်က အရင်က အင်အားအနည်းငယ်နဲ့ စခန်းထိုင်ခဲ့တဲ့ စခန်းတွေကို SSA က အင်အားအများအပြားနဲ့ အခိုင်အမာ ခံစစ်ပြင်ထားလို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခက်ခက်ခဲခဲ တိုက်ယူခဲ့ရတယ်။ တပ်မတော်ဘက်က ၁၂၀ မမ စိန်ပြောင်းကြီးတွေ အများအပြား အသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ မော်တာ ကျည်တချို့ ထိုင်းနိုင်ငံထဲ ကျရောက်တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံက စတင် ပြောဆိုလာတယ်။ တပ်မတော်ဟာ မုံးထော်၊ မုံးထ တို့ကို ပြန်လည် သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရန်သူဟာ ပိုမြင့်တဲ့ တောင်တွေပေါ်ကနေ ဆက်လက် ခုခံကြတဲ့ အတွက် တိုက်ပွဲကြီးတွေ ဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရန်သူအခိုင်အမာ ခံစစ်ပြင်ထားတဲ့ ထောင်ထိပ် စခန်းတွေကို အငိုက်မရရှိဘဲ ရှေ့တည့်တည့်ကနေ ဒဲ့တက် တိုက်ရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အထိအခိုက် အကျအဆုံးလည်း အင်မတန်မှ များခဲ့တယ်။ ရန်သူကလည်း ယာဘဆေးတွေ သုံးစွဲထားပြီး တောင်ထိပ်က အမိုးပါခံကတုတ်တွေထဲမှာကျည်ဆံ အလျှံပယ်ထည့်ပြီး ခုခံကြတာ ဖြစ်တယ်။ အကာအကွယ် မရှိတဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်ကို ရဲစွမ်းသတ္တိ တစ်ခုတည်းကို အရင်းပြုပြီး ရင်ဖွင့်ပြီး တက်တိုက်ခဲ့ကြတဲ့ တပ်မတော်သား အားလုံး ဒီနေရကနေ အလေးပြုပါတယ်။ အဲဒီ့ တိုက်ပွဲစဉ် တစ်လျှောက်မှာ ဝ တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ စွမ်းရည်ဟာလည်း မှတ်တမ်းတင်ရလောက်အောင် လေးစားစရာဖြစ်ခဲ့တယ်။
အကြီးဆုံး တိုက်ပွဲကြီးတွေကတော့ ပန်မိုင်ဆွန် တိုက်ပွဲ၊ ၄၀၀၈၈၇ တိုက်ပွဲ၊ ပန်ကန့်ကော် တိုက်ပွဲ၊ ညောင်ပင်ကုန်း တိုက်ပွဲ တွေဖြစ်တယ်။ ၄၀၀၈၈၇ တိုက်ပွဲဟာ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ တိုက်ပွဲ တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး တောင်ရဲ့ တောင်ခါးပန်း တဝက်မှာ ရှိတဲ့ (ပွိုင့်-xxxx) ကို တပ်မတော်က သိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး ရန်သူနဲ့ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ် ခြေကုန်ယူထားစဉ်မှာ တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ရန်သူက လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ဦးနှိမ်ပစ်ခတ်ပြီး ပြန်သိမ်းယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အပေါ်စီးကနေ ပစ်ခတ်ပြီး တန်ပြန် ထိုးစစ်ဆင်လာတာကို ပြန်မကျဆုံးအောင် ခုခံနိုင်ခဲ့လို့သာ ဒီတိုက်ပွဲမှာ ရည်မှန်းချက်ရရှိတဲ့ အထိ အောင်မြင်အောင် ဆက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲစစ် တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း မိမိ တိုက်စစ်ရပ်တန့်သွားတဲ့ အချိန်မျိုး၊ ကျားတက်ထိုးရာကနေ လန်ကျလာတဲ့ အခါမျိုးမှာ ရန်သူက ထုတ်နှုတ်အင်အားနဲ့ တန်ပြန် ထိုးစစ် ဆင်လေ့ရှိခဲ့တယ်။ ပန်ကန့်ကော် တိုက်ပွဲမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်က ပစ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီး ကျည်တွေ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကျတဲ့အတွက် အရပ်သား အချို့ ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ထိုင်းဘက်က ပြောဆိုလာပြီး ထိုင်းတပ်က မြန်မာတပ်ကို လက်နက်ကြီးနဲ့ ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာဘက်ကလည်း တုံ့ပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး နယ်စပ်တင်းမာမှု အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၁ တိုက်ပွဲစဉ်တုန်းကလို ထိုင်းတပ်နဲ့ မြန်မာတပ်တွေ ထိတွေ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမျိုး အထိတော့ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ထိုင်းတပ်က SSA ကို လက်နက် ရိက္ခာအကြီးအကျယ် ထောက်ပံ့တာမျိုး၊ သူတို့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထဲကနေ ထိုးစစ် ဆင်နိုင်အောင် ကူညီတာမျိုးနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ လက်နက်ကြီး အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တာမျိုး အထိပဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အက်စ်အက်စ်အေ တပ်များ ဆုတ်ခွါရာ လွယ်တိုင်းလျှံ တောင်ကုန်း
ညောင်ပင်ကုန်းစခန်းတိုက်ပွဲဟာ တိုက်ပွဲစဉ် တလျှောက်မှာ အကျအဆုံးအများဆုံးနဲ့ ရင်းနှီးပြီးမှ စခန်းကို သိမ်းပိုက်ရရှိပါတယ်။ ဒီစခန်းကို နည်းဗျူဟာကွပ်ကဲမှု အဖွဲ့တစ်ခု၊ တပ်ရင်း(၃)ရင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တိုက်ပွဲ မစတင်မီမှာ ဗျူဟာမှူးက စခန်းကို ရရှိပြီလို့ ကြိုတင် သတင်းပို့ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကာ ဘုရင့်နောင်ထုံး နှလုံးမူပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
ပန်မိုင်ဆွန်တိုက်ပွဲမှာလည်း ဝ တပ်ဖွဲ့ဟာ လူဦးရေ ၈၀ လောက် ကျဆုံးခံပြီး အသေခံကာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။
ရေးသားသူ MM at 2:16 PM No comments:
ဟန်ချက်ညီညီ ပြောင်းလဲဖွံ့ ဖြိုးမှု-၂
နံပါတ်(၄)အချက်...။ ။ နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့... နံပါတ်(၄)အချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် တစ်ဦးချင်းသိတတ်မှုသာမက တပ်ဖွဲ့ကြီးအလိုက်၊ တပ်မတော်တရပ်လုံးစွမ်းဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေပါ ပါဝင်နေပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ဟာ ဥပဓိရုပ်လိုနေပါသေးတယ်... အရပ်စကားနဲ့ ပြောရရင် လူရှိန်ဖို့အတွက် အချို့အချက်ကလေးတွေ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်စဉ်ကျင်းပလာတဲ့ တပ်မတော်နေ့... အခု ရပ်နားထားပါတယ်(ဖျက်သိမ်းလိုက်တာလားတော့ မသိပါ)။ ဒါဟာ စစ်အသုံးစရိတ်ကို ကုန်ကျစေတယ်၊ မှန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအခမ်းအနားကြီးအတွက် အဘက်ဘက်က စာရင်းဇယားတွေ၊ အလုပ်တွေ၊ စီမံခန့်ခွဲရမှုတွေ၊ ကွပ်ကဲရမှု၊ ဦးရေးထောက်တာဝန်တွေဟာ တကယ်ကြီးမားတဲ့ တာဝန်ကြီးတခုဆိုတာလဲ မှန်ပါတယ်။ ဒီလို ကုန်ကျသွားမယ့် ငွေတွေအစား ခေတ်မီတိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်ဖြစ်၊ တင့်ကားတစ်စီးဖြစ်ဖြစ် ဝယ်လိုက်တာကမှ အကျိုးရှိဦးမယ်လို့ ဆိုလာရင်လဲ ကျွန်တော် ထောက်ခံမိမှာပါ။ ဒါပေမယ့်... တခုတော့ ရှိသွားတယ်ဗျာ။
ဥပမာ - တရုတ်တပ်မတော်ကိုပဲ ကြည့်ပါ။ တရုတ်ဟာ သူ့စစ်ရေးစွမ်းရည်၊ လက်နက်ထုတ်လုပ်ထားမှုတွေ၊ သူ့နိုင်ငံရဲ့ လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့ စုဖွဲ့မှုအင်အားနဲ့အရည်အချင်းတွေကို သူ့ပြည်သူတွေသာမက ကမ္ဘာကပါသိအောင် မီဒီယာနည်းနဲ့ လက်တွေ့မျက်မြင်ပြသနေတာကို မိတ်ဆွေတို့လဲ သိကြမှာပါ။ သူတို့ရဲ့အဓိကတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ရေတပ်၊ လေတပ်၊ အမြောက်တပ်၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်၊ တင့်တပ်စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ လေ့ကျင့်ပစ်ခတ်ပြသမှုတွေ၊ ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဟာ သူ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာ "အားကိုးလိုစိတ်၊ အထင်ကြီးစိတ်၊ လေးစားစိတ်"တွေဖြစ်ပေါ်စေရုံသာမက သူတို့တပ်မတော်ဟာ ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါ ပြည်သူတွေကို အသိပေးတဲ့သဘော ဆောင်နေပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်တွေ ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် တပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ တသားထဲဖြစ်မှု စိတ်ဓာတ်အင်အားနဲ့ ကိုယ့်အလုပ်အပေါ်ကိုယ် ဂုဏ်ယူရမှုတွေကြောင့် စစ်သည်တဦးချင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်အနေအထားတွေကလဲ မြင့်တက်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ကို ကြည့်ရအောင်...။ ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ကတော့ ကြောင်လက်သည်းဝှက်သလို ပြုမူနိုင်လွန်းပါတယ်၊ အချိန်မတန်သေးခင် မထုတ်ပြသေးတာလို့ပဲ ပြောရမလား၊ မလိုအပ်ဘူးလို့ ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ မထုတ်ပြသေးတာလို့ပဲ ပြောရမလား။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် တပ်မတော်ရဲ့ သာမန်တပ်သားလေးတယောက်အဖို့တောင်မှ ကိုယ့်တပ်မတော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ယုံကြည်မှုရှိဖို့ စိတ်ဓာတ်အင်အားလိုအပ်နေတယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်တပ်မတော်မှာ ဘာတွေရှိတယ်၊ ဘာတွေ လုပ်နိုင်တယ်၊ ဘယ်လိုအရည်အချင်း၊ စွမ်းရည်တွေရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင် မမြင်တွေ့၊မသိရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်မှာ အရင်ကလို ကုန်းရေနှစ်သွယ် ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်တာမျိုး၊ နောက်ပြီး ကြည်းရေလေပူးပေါင်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်တာမျိုး၊ လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေ ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်တာမျိုး မရှိသလောက်ပါပဲ။ ခြေလျင်ခြေမြန်တပ်ရင်းတွေရဲ့ နောက်တန်းပြန်အနားယူချိန်မှာ တပ်မအလိုက် Refit ဝင်တာတွေတော့ ရှိပါတယ်... ဒါပေမယ့် ဒါတွေကိုလဲ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Refit ဝင်ချိန်မှာ ၆ဝ မမ စိန်ပြောင်းပစ်ခတ်မှု လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ စစ်သည်တယောက်ကို တကယ်ရှေ့တန်းထွက်တော့ MA-2 ကိုင်ခိုင်းတာ၊ MA-4 ကိုင်ခိုင်းတာမျိုး... ဒါတွေဟာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သူ့နေရာ အစားဝင်မယ့်သူဟာ စိန်ပြောင်းပစ်ခတ်မှုမှာ အသားကျနေရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် စိန်ပြောင်းပစ်ခတ်မှုနဲ့ သိပ်မကျွမ်းဝင်သေးတဲ့ အခြားတပ်သားတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒါ တကယ်လက်တွေ့ ရှေ့တန်းမှာ ပစ်ရခတ်ရတဲ့အခါမှာ တိတိကျကျ ပစ်မှတ်ကို ချေမှုန်းနိုင်ဖို့ ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပါပဲ... Refit ဝင်တုန်းက MG-53 စက်လတ်ပစ်ခတ်မှု လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့သူ၊ ပုခုံးထမ်းလောင်ချာပစ်ခတ်မှု လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့သူ၊ ဒသမ ၅ စက်သေနတ်ကြီးပစ်ခတ်မှု လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့သူ၊ ၈ဝ မမ စိန်ပြောင်းပစ်ခတ်မှု လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့သူ စတဲ့စတဲ့သူတွေဟာ တပ်ရင်းတွေ တကယ်ရှေ့တန်းထွက်ရင်လဲ သူတို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်ရာလက်နက်အမျိုးအစားတွေအလိုက် ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပါသွားတာပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ တခြားလက်နက်တွေ ကိုင်ပြီး ရှေ့တန်းမှာ ပါသွားမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းရည်တွေကို အလဟဿဆုံးရှုံးလိုက်ရသလိုပါပဲ။ တိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါ စောစောကပြောတဲ့ တပ်ခွဲအဆင့်၊ တပ်ရင်းအဆင့် လက်နက်ကြီးတွေရဲ့ လိုအပ်တဲ့ပစ်အား၊ တိကျမှု၊ မြန်ဆန်မှုကို မရတာ အဲဒီအချက်တွေကြောင့်ပါ။ ဒါ... ကျွန်တော့်လက်တွေ့ပါပဲ။ ဒါကိုလဲ တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်ရဲ့ ပညာပေးကြပ်မတ်စစ်ဆေးမှုတွေ လိုအပ်နေပါသေးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် မီးမောင်းထိုးပြချင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်တော် စောစောက ပြောခဲ့သလို လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေ... ဒါတွေဟာ တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ဟာ လက်ရှိပြည်တွင်း သောင်းကျန်းသူတွေလောက်နဲ့ တပ်မတော်ရဲ့စွမ်းရည်ကို တိုင်းတာနေရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းသူအဆင့်မှာ အမြောက်၊ တင့်၊ လေကြောင်းရန်၊ ရေ၊ လေ စတဲ့ အဓိကလက်ရုံးတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့ စွမ်းရည်ကို တိုင်းတာခွင့်မရပါဘူး။ တကယ်လို့သာ ပြည်ပကျူးကျော်မှု တခုခုကြောင့် ဒီလက်ရုံးတပ်မကြီးတွေကို ချက်ချင်းလက်ငင်း အသုံးပြုရတော့မယ်ဆိုပါစို့... ကျွန်တော်တို့တွေ အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်မလား ? လုံလောက်တဲ့ ကိုင်တွယ်မှုစွမ်းရည်တွေကို ရရှိနိုင်ပါ့မလား ? ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်တွေဆိုရင်လဲ အဲဒီတင့်တွေရဲ့ တင့်စစ်သည်တွေဟာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား...၊ ၁၅၅ မမ အမြောက်ကြီးတွေဆိုရင်လဲ အဲဒီရဲ့အမြောက်စစ်သည်တွေဟာ ပစ်မှတ်တွေကို တိတိကျကျ ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ အသားကျနေပြီလား...၊ လေကြောင်းရန်ရဲ့ Air Defence စနစ်တွေဆိုရင်လဲ ကိုယ့်မြေပေါ်ကို ကျူးကျော်လာမယ့် အခြားတိုက်လေယာဉ်တွေ၊ တာဝေးပစ်ဒုံးတွေကို ကြားဖြတ်တားဆီးနိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား...၊ လေတပ်ရဲ့ တိုက်လေယာဉ်မှူးတွေကရော အချိန်မရွေးအဆင်သင့်ထပျံပြီး တိုက်နိုင်မယ့်စွမ်းရည်ရှိနေပြီလား ?
ဒါတွေကို မထောက်ထားမညှာတာပဲ အဖြေထုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ "လိုအပ်နေပါသေးတယ်"လို့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒါ... ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ Training အသား မကျသေးလို့ပါပဲ။ သာမန်လူတယောက်မှာတောင် ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုတာ ဘာလုပ်လုပ် အထစ်အငေါ့ရှိတတ်ပါသေးတယ်... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာလက်နက်ကြီးတွေကို ကိုင်တွယ်နေရတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့စစ်သည်တွေအဖို့တော့ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ သူတို့ဟာ တကယ်တမ်း အရေးရယ်အကြောင်းရယ် ရှိလာတဲ့အခါမှာ ယုံကြည်မှုရနေဖို့အတွက် အတွေ့အကြုံတွေ၊ လေ့ကျင့်မှုတွေ ရှိနှင့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နည်းလမ်းကတော့ သူတို့ကို ကျည်စစ်ကျည်မှန်နဲ့ လေ့ကျင့်ပေးနိုင်မှု...၊ ပုံမှန် Alert ပေးပြီး လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေအချင်းချင်း တပ်မတော်တွင်းမှာ ၆ လတန်သည်ဖြစ်စေ၊ ၁ နှစ်တန်သည်ဖြစ်စေ ၁ ကြိမ်ကျ ပုံမှန်စစ်ရေးပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကို ကျည်စစ်ကျည်မှန်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပါပဲ။ ဒါမှသာ လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့ စစ်သည်တိုင်းစစ်သည်တိုင်းဟာ အမြဲတမ်း Active ဖြစ်နေပြီး ကိုယ် ကိုင်တွယ်ရတဲ့ လက်နက်ကြီးတွေအပေါ် ကျွမ်းကျင်မှု၊ ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရေးအသုံးစရိတ် ကုန်ကျမှုရှိမှာတော့ မှန်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ရရှိလာမယ့်အကျိုးအမြတ်အနေနဲ့ တပ်မတော်ကြီးတရပ်လုံးရဲ့ စိတ်ဓာတ်အင်အားကိုသာမက စစ်သည်တွေရဲ့ စစ်ရေးစွမ်းရည်တွေပါ အသင့်အနေအထားဖြစ်လာအောင် တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ တပ်မတော်အတွက် အဓိကဖြစ်တဲ့ "တိုက်စွမ်းရည်နဲ့စိတ်ဓာတ်"ပါပဲ...။
ဒီလိုလေ့ကျင့်နေခြင်းအားဖြင့် လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေသာမက ကျန်တဲ့ ခြေလျင်ခြေမြန်စစ်သည်တွေအဖို့လဲ မိမိတို့တပ်မတော်ရဲ့ စွမ်းရည်နဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်နေရတဲ့အတွက် အမိတပ်မတော်အပေါ်၊ အမိတပ်မတော်ရဲ့စွမ်းရည်တွေအပေါ် ယုံကြည်ကိုးစားမှုနဲ့အတူ စိတ်ဓာတ်အင်အားသာမက တပ်မတော်သားတယောက်ဖြစ်နေရတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ဂုဏ်ယူတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေပါ ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအဖို့ရော... ထို့အတူပါပဲ။ ရိုးရိုးပြည်သူတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး...၊ "အလကားပါကွာ... လစာယူပြီး ဘာမှ ဟုတ်တဲ့ကောင်တွေ မဟုတ်ဘူး"လို့ အပြစ်ပြောနေကြတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်ပိုင်ရှင်တွေတောင် ပါးစပ်တွေ ပိတ်ကုန်ကြမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်တော် တခုပြောချင်တာက ပုံမှန် ဦးရေးထောက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အိပ်မောကျနေတဲ့ တပ်မတော်ကြီးကို လှုပ်နှိုးဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ၊ အချိန်တန်ပါပြီ"လို့...။ တပ်မတော်ဆိုတာ အဓိက,က နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့ပါ၊ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့တိုက်စွမ်းရည် အပြည့်ရှိနေရပါမယ်... ဒါကို ဖြည့်ဆည်းဖို့လဲ တပ်မတော်သားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းသူအဆင့်လောက်နဲ့ မျက်စိပိတ်၊ နားပိတ်နေတဲ့ စစ်သည်တိုင်းကို နိုင်ငံတကာအဆင့်ထိ မျက်စိဖွင့်၊ နားဖွင့်ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ၊ သူတို့ရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို လေ့ကျင့်မှုနဲ့တွေအတူ အသားကျအောင် မြှင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီလို့ ကျွန်တော် ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ MM at 12:30 PM4comments:
ဟန်ချက်ညီညီ ပြောင်းလဲဖွံ့ ဖြိုးမှု
အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါသည် ဆောင်းပါးရှင်ကို unknownမှ ပေးပို့ထားသော ဆောင်းပါဖြစ်ပါသည်။မြန်မာ့တပ်မတော် တိုးတက်စေရေး အတွက် မည်သည့်ဘက်မှ ဘက်မလိုက်ဘဲ ဖော်ပြပေးသော ကြောင့် ဤဆိုက်တွင် တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်မှာ လိုအပ်နေတာတခုက "ဟန်ချက်ညီညီ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှု"ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်... ယခုလက်ရှိ ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ဟာ အရင့်အရင်တပ်မတော်တုန်းကလို (အရင့်အရင်ဆိုတာ ဟိုးအေ​ဝးကြီး BIA , BDA တပ်မတော်တွေကို ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ တရုတ်ဖြူကျူးကျော်စစ်ဖြစ်ခဲ့တုန်းက တပ်မတော်လောက်ကိုပဲ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်) အဲဒီတပ်မတော်လောက်ကိုပဲ ပြည်သူလူထုရဲ့ ကြည်ညိုမှု၊ အားကိုးမှု၊ ရင်းနှီးနွေးထွေးမှု၊ ထောက်ခံမှုတွေ မရတော့တာကို မိတ်ဆွေတို့လဲ တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။ ဒါတွေဟာ
(၁) အနောက်အုပ်စုရဲ့(ငွေကြေး၊စက်ကိရိယာ၊နည်းပညာ)ပံ့ပိုးမှုတွေ အားကောင်းကောင်းနဲ့ နေ့ညဉ့်မပြတ် နှစ်နဲ့ချီပြီး အဆက်မပြတ် ထုတ်လွှင့်နေခဲ့တဲ့ ပြည်ပအတိုက်အခံ လေလှိုင်းဋ္ဌာနတွေရဲ့ ဝါဒဖြန့်သွေးထိုးမှုတွေ...၊
(၂) မတစ်ထောင်သားဆိုသလို တပ်မတော်ရဲ့ စစ်သည်တွေထဲကမှ (စစ်သည်ဆိုတာ အရာရှိ၊အခြားအဆင့်အကုန်လုံးကို ဆိုလိုပါတယ်) အချို့အချို့သော စိတ်ဓာတ်၊ ပြုမူကျင့်ကြံမှု မမှန်ကန်ဖောက်ပြန်တဲ့ စစ်သည်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် အချို့သော ပြည်သူတွေထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတာကို အကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကလေးတွေ.. (ဒီဖြစ်ရပ်ကလေးတွေကို အထက်ပါ ဝါဒဖြန့်သတင်းဋ္ဌာနတွေအနေနဲ့ ပုံကြီးချဲ့အခွင့်အရေးယူကြတဲ့အလုပ်ကတော့ ကောင်းကောင်းကြီး လုပ်တတ်ကြပါတယ်.. ဒါကလဲ တော်တော့ကို အရေးပါ,ပါတယ်)...၊
(၃) မတတ်သာတဲ့ နိုင်ငံ့အရေးအခင်းတွေမှာ အဓိက တာဝန်ယူဦးဆောင်ခဲ့ရတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ပါဝင်ခဲ့ရမှုတွေ.. (အနီးစပ်ဆုံးကြည့်ရင် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလို့ သူတို့ဘာသာ နာမည်လှလှပေးထားကြတဲ့ ဘုန်းကြီးဆူပူမှု)..၊
နောက်ပြီး နောက်ဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံး အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့...
(၄) လူတယောက်မှာဆိုရင် "ဥပဓိရုပ်"လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မယ့် တပ်မတော်ရဲ့ အဘက်ဘက်က နေထိုင်မှုတွေ...၊
ထိုသို့သောအကြောင်းအချက်တွေကြောင့်ပဲ တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူလူထုကြားမှာ အရင်ကလို ထည်ဝါမှု၊ ထောက်ခံမှု၊ အားကိုးမှု... မရတော့၊ မရှိတော့တာလို့ ကျွန်တော် သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အသေးစိတ် ထပ်ဆွေးနွေးပါ့မယ်...။
နံပါတ်(၁)အချက်ဗျာ...။ ။ တခြားကိုမကြည့်ပါနဲ့၊ သစ်ငုတ်တိုတောင် ကြာကြာနှဲ့ရင် လှုပ်လာပါတယ်။ ပင်လယ်ထဲက ကျောက်ဆောင်တွေတောင် ရေတိုက်စားပါများတော့ ပြိုလဲပျက်စီးရသေးတာပါပဲ... လူဆိုတာက တစ်ခွန်းပြောရင် နားမဝင်၊ နှစ်ခွန်းပြောရင် နားမဝင်ချင်ပေမယ့် သုံးခွန်းမြောက်ကျတော့ "အင်း ဟုတ်များ... ဟုတ်များနေမလား" ဆိုတာက ဖြစ်လာတတ်တာ သဘာဝပါပဲ။ နိုင်ငံခြားက လေလှိုင်းဋ္ဌာနတွေက ၁ ခွန်း၊ ၂ ခွန်း၊ ၃ ခွန်းထဲ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း လက်ဖက်နည်းနည်းလေးကို ဂေါ်ဖီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်ကြော်၊ ကုလားပဲကြော်၊ မြေပဲဆံကြော်စတဲ့ အဆာပလာတွေနဲ့ စားကောင်းအောင် သုပ်ထားသလိုမျိုးပဲ... အမှန်နဲ့နီးစပ်သယောင်ရှိတဲ့ သတင်းအရင်းအမြစ်ကလေးကို အခြားသော သွေးထိုးစကားတွေ၊ သူတို့​ဝါဒဖြန့်လိုတဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းစကားတွေ၊ အကြောင်းအရာကလေးတွေနဲ့ မွမ်းမံပြီး နှစ်ရှည်လများ (နေ့၊ည ပုံမှန်) ထုတ်လွှင့်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်လွှင့်နေတာမှ အသံလွှင့်ဋ္ဌာနတစ်ခုထဲ မဟုတ်ပါဘူး... ၄ ခု ၅ ခုကနေ ဝိုင်းဝန်း Press ပေးသလို မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ခေါင်းထဲကို နှစ်ရှည်လများ ရိုက်သွင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သတင်းတွေဟာ သူတို့အကြံအဖန်ထုထားတာတွေလဲ ပါသလို... တကယ်တပ်မတော်ရဲ့ အမှားတခုလောက် တွေ့လိုက်တာနဲ့ ပိုမိုထင်ရှားအောင် အကြီးချဲ့ သွေးထိုး၊ ရိုက်သွင်း၊ လှုံ့ဆော်၊ ထောက်ပြအော်ဟစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့လဲ သိကြမှာပါ။ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော်တို့၊ မိတ်ဆွေတို့ ငယ်ငယ်ကထဲက ထုတ်လွှင့်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုကျွန်တော်တို့ လူကြီးပိုင်းရောက်လို့ နိုင်ငံ့တာဝန်တွေလဲ ယူနေကြရပါပြီ.. သူတို့ရဲ့ အဲဒီတလျှောက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ကာလ၊ အသက်ဆက်မှုအတိုင်းအတာအတွင်းမှာ ဘယ်လောက် တာခဲ့မလဲဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ တွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အစကတော့ စိတ်ဝင်စားချင်မှ စိတ်ဝင်စားမှာဖြစ်ပေမယ့် တပ်မတော်ရဲ့အမှားတစ်ခုမှာ ဒါတွေရဲ့ ထုတ်လွှင့်မှုတွေကို အဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီး ယုံကြည်ကိုးစား၊ လက်ခံသွားကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အများကြီးပါပဲ... အဲဒီပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ တပ်မတော်ဆိုတာ Negative ဖြစ်နေမှာပါ...။ ဒါ နံပါတ်တစ်အချက်ပါ။
နံပါတ်(၂)အချက်...။ ။ ဒီအချက်နဲ့ပတ်သတ်လို့ အရိုးရှင်းဆုံး ဥပမာတစ်ချက်ပဲ ပြောပါမယ်ဗျာ..။ "လက်တစ်ဖက်ထဲသော်မှ အတိုအရှည် မညီပါဘူး"။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တပ်မတော်ကြီးဟာလဲ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၊ သူတော်စင်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေ... ရိုးသားပြီး ဖြောင့်မတ်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ချည်း ဖွဲ့စည်းထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ "မင်းတို့အားလုံး ဒီလိုတွေချည်းပဲ... အားလုံး လူယုတ်မာ၊ အားလုံး စစ်ခွေး၊ သူများနောက်လိုက်၊ ခေါင်းတော်ညိတ်၊ စိတ်တော်သိတွေချည်းပဲ"လို့တော့ လာပြောမယ်မကြံပါနဲ့...၊ အဲဒီလိုပြောတဲ့သူ အနားမှာရှိရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက် တပ်မတော်သား စစ်သည်အားလုံးကိုယ်စား ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ထ,သတ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်၊ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဘယ်ပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ကျူးလွန်နှိပ်စက်စော်ကားမှု မရှိပဲ ဖြောင့်မတ်စွာ နေခဲ့သလို ကျွန်တော့်လို တပ်မတော်သားစစ်သည်တွေ အများကြီးပါ... ဝါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကျုံးရမ်းတာမျိုးကိုတော့ ဘယ်သူမှ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့အချို့သော စစ်သည်(အရာရှိ၊ အခြားအဆင့်အားလုံးကို ဆိုလိုပါတယ်)တွေရဲ့ အမှားအယွင်းတွေ ရှိပေမယ့် တစ်ယောက်မကောင်း အများဆိုသလို ဒါဟာ တပ်မတော်ကြီးတရပ်လုံးရဲ့ Image ကိုပါ လာထိခိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ အထက်ကဆိုခဲ့တဲ့ အသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွေ၊ အတိုက်အခံဆိုသူတွေအားလုံးရဲ့ အဓိကအားကိုးအားထားနေကြတဲ့ လက်နက်ကြီးတခုပါပဲ။
နံပါတ်(၃)အချက်...။ ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ သူများနိုင်ငံတွေလို အဓိကရုဏ်းနှိမ်နှင်းရေးအတွက် အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားတဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့တွေ မရှိသေးပါဘူး။ ရဲတွေဆိုတာဟာလဲ နိုင်ငံတွင်းက အစိုးရတစ်ရပ်ကို စိန်ခေါ်လာတဲ့အထိ မင်းမဲ့ဆူပူမှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်လာမယ့် ထကြွအကြမ်းဖက် လူအုပ်စုစည်းလာမှုတွေကို အဟန့်ကောင်းကောင်းဖြစ်သွားစေမယ့် ခေတ်မီလက်နက်ကိရိယာတွေ၊ သွင်ပြင်ဥပဓိတွေ ကောင်းကောင်း တပ်ဆင်ပေးထားမှုမရှိသေးပါဘူး...။ မြို့နယ်အလိုက် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွေကို အသာထားလို့ စုစည်းမှုအင်အားကောင်းကောင်းရှိနေတဲ့ ရဲတပ်ရင်းကြီးတွေမှာတင်ကို ဆူပူမှုအဓိကရုဏ်းတစ်ခုအတွက် အဲဒီလို ခေတ်မီလက်နက်ကိရိယာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ကောင်းကောင်းမရှိသေးပါဘူး။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အဲဒီလို အဓိကရုဏ်းတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် သီးသန့်တပ်ဖွဲ့ ထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံက သီးသန့်တပ်ဖွဲ့ ထားကြပါတယ်။ မထားနိုင်တဲ့ နိုင်ငံကတော့ ရဲတွေကိုပဲ အထူးသင်တန်းပေးပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် ဆူပူအုံကြွမှုတရပ်မှာ အတိုက်အခံဘက်က ပါလာတဲ့သူတွေဟာ.. မျက်နှာဖုံး၊ ဒူးကာ၊ တံတောင်ကာစသဖြင့် တကိုယ်လုံးစာ အပြည့်အစုံပါဝင်တဲ့ ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ၊ ကျည်ကာဒိုင်း၊ လက်ကိုင်တုတ်၊ ကျဉ်စက်၊ စပရေးစသဖြင့် လက်နက်ကိရိယာအပြည့်အစုံပါဝင်ပြီး Training ကောင်းကောင်းပေးထားတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတောင့်တောင့်တင်းတင်း၊ အဟန့်ဥပဓိကောင်းကောင်းနဲ့ ဖြိုခွင်းရေးတပ်ဖွဲ့တခုကို မြင်လိုက်တာနဲ့ အနည်းအကျဉ်းတော့ stress ဖြစ်သွားပါတယ်။ နိုင်ငံအတော်များများမှာ အဲဒီလို အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကို အဓိကရုဏ်းတွေအတွက် သီးသန့်လေ့ကျင့် သင်တန်းပေးထားပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲတပ်ဖွဲ့သက်သက်၊ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းရေးက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းရေးသက်သက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အဲဒီလိုတပ်ဖွဲ့မျိုး မရှိသေးတဲ့အတွက် အဓိကရုဏ်းတခုဖြစ်လာရင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ကိုင်တွယ်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဆီက ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ဥပဒေချိုးဖောက်လို့ အပြစ်ပေးအရေးယူ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရတဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်တာ မှန်ပေမယ့် ဒီလိုဆူပူမှုကြီးတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ရာမှာ အဟန့်လိုပါသေးတယ်။ လေးဂွလောက်၊ ဝါးရင်းတုတ်လောက်ကိုင်ထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ဆူပူထကြွလာတဲ့လူအုပ်ကြီးကို ထိန်းသိမ်းဖို့(ခံစစ်)လောက်ပဲ တတ်နိုင်ပါမယ်၊ ဖြိုခွင်းပျက်ပြားစေဖို့(တိုက်စစ်)ကတော့ မစွမ်းသာပါဘူး။ ဒါကြောင့်အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်လာတယ်လို့ ယူဆရင် တပ်မတော်က ပါဝင်ကွပ်ကဲပါတယ်။
ရေးသားသူ MM at 12:17 PM2comments:
အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါသည်။အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ညကြည်မှန်ပြောင်းတွေတပ်ဆင်ပေးထားကြောင်းတွေ့ရသည်။အဆိုပါ အထူးတပ်ဖွဲ့များသည် လေထီးစစ်သည်များမှ ထပ်ဆင့်ဖွဲ့စည်းထားဟန်ယူဆရပါသည်။
အနာဂါတ်တွင် အသုံးပြုမည်ဟု ယူဆရသော ဝတ်စုံ (defencepakistan.net) မှဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ဘင်္ဂလားဒေ့် စစ်ရေးပြပွဲတွင် ဝတ်ဆင်ခဲ့သော ဝတ်စုံ
နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့် ပြဿနာဖြစ်စဉ်က ဝတ်ဆင်ခဲ့သော ဝတ်စုံ
ဝတ်စုံများနှင့် ပတ်သက်လို့ နှိုင်းလို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ရေးသားသူ MM at 1:49 PM5comments: